Lawrence Pressman – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
American Wedding (2003) Unicode ဒီတဈခါတော့ 2003ခုနှဈကထှကျခဲ့တဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဟာသဇာတျမွူးကားလေးကို မိတျဆကျပေးခငျြပါတယျ။ သုံးနှဈကွာတှဲခဲ့တဲ့ခဈြသူကို လကျထပျခှငျ့တောငျးဖို့ ပွငျဆငျထားခဲ့ပမေယျ့ အစတညျးက အလှဲတှေ အကွီးကွီးဖွဈခဲ့ပွီး သူငယျခငျြးတှေ‌ကွောငျ့ အထငျလှဲစရာတှရေော မကျြနှာပကျြစရာတှပေါ ဆကျတိုကျဖွဈလာခဲ့တဲ့နောကျမှာ မဂျလာပှဲကို အောငျအောငျမွငျမွငျ ကငျြးပသှားနိုငျမလားဆိုတာကို‌တော့ "American Wedding" ဆိုတဲ့ကားလေးထဲမှာ ကွညျ့ရှုခံစားပေးပါဦးနျော။ (ပှငျ့လငျးမွငျသာတဲ့အခနျးတဈခြို့နဲ့ ရိုငျးစိုငျးတဲ့စကားလုံးတှပေါတာမို့ မိသားစုနဲ့အတူမကွညျ့သငျ့ပါ‌ကွောငျး) ဇာတျလမျးအညှနျး နဲ့ ဘာသာပွနျဆိုသူကတော့ Yati ဖွဈပါတယျ။ Zawgyi ဒီတစ်ခါတော့ 2003ခုနှစ်ကထွက်ခဲ့တဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဟာသဇာတ်မြူးကားလေးကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ သုံးနှစ်ကြာတွဲခဲ့တဲ့ချစ်သူကို လက်ထပ်ခွင့်တောင်းဖို့ ပြင်ဆင်ထားခဲ့ပေမယ့် အစတည်းက အလွဲတွေ အကြီးကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီး သူငယ်ချင်းတွေ‌ကြောင့် အထင်လွဲစရာတွေရော မျက်နှာပျက်စရာတွေပါ ဆက်တိုက်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့နောက်မှာ မဂ်လာပွဲကို အောင်အောင်မြင်မြင် ကျင်းပသွားနိုင်မလားဆိုတာကို‌တော့ "American Wedding" ဆိုတဲ့ကားလေးထဲမှာ ကြည့်ရှုခံစားပေးပါဦးနော်။ (ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့အခန်းတစ်ချို့နဲ့ ရိုင်းစိုင်းတဲ့စကားလုံးတွေပါတာမို့ မိသားစုနဲ့အတူမကြည့်သင့်ပါ‌ကြောင်း) ဇာတ်လမ်းအညွှန်း နဲ့ ဘာသာပြန်ဆိုသူကတော့ Yati ဖြစ်ပါတယ်။
IMDB: 6.3/10 198k votes
American Pie (1999) Unicode ငယျငယျတုနျးကဒီကားကိုအိမျမှာ ဘျောဒါတှနေဲ့ခိုးကွညျ့တာတို့ တဈယောကျထဲကွညျ့တာတို့ မလုပျဖူးတဲ့သူမရှိဘူးလို့ထငျပါတယျ.အဲ့တုနျးကအခုလိုပေါသောနတေဲ့ 18+ ကားတှမေရှိသလို အဖျောအခြှတျတှတော လှယျလှယျရှာမရတဲ့အတှကျ ဒီလိုကားတှကေိုခိုးကွညျ့ရဖူးတဲ့သူတှအေမြားကွီးရှိခဲ့မယျထငျပါတယျ။ ဒီကားက 18+ ဟာသတှနေဲ့ လူပြိုစဈစဈလေးတှအေလှဲလှဲအခြျောခြျောဖွဈရတာကို ပိုးဆိုးပတျစကျရယျရတဲ့ ဇာတျကားဖွဈပါတယျ. ပထမဆုံးကားဖွဈတဲ့အတှကျအခွားကားတှထေကျ ပိုကောငျးသလိုလဲခံစားရပါတယျ. ဇာတျလမျးအကဉျြးအနနေဲ့ကတော့ လူပြိုဘ၀ကိုကြှတျခငျြနတေဲ့ ဘျောဒါတှကြေောငျးကပှဲညမှာ ကြှတျဖို့ကွိုးစားရငျး အောငျမွငျမူ့ရပါ့မလားဆိုတာကို ဟာသတှအေနနေဲ့ကော 18+ အနနေဲ့ကောကွညျ့ရမှာဖွဈပါတယျ။ Zawgyi ငယ်ငယ်တုန်းကဒီကားကိုအိမ်မှာ ဘော်ဒါတွေနဲ့ခိုးကြည့်တာတို့ တစ်ယောက်ထဲကြည့်တာတို့ မလုပ်ဖူးတဲ့သူမရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်.အဲ့တုန်းကအခုလိုပေါသောနေတဲ့ 18+ ကားတွေမရှိသလို အဖော်အချွတ်တွေတာ လွယ်လွယ်ရှာမရတဲ့အတွက် ဒီလိုကားတွေကိုခိုးကြည့်ရဖူးတဲ့သူတွေအများကြီးရှိခဲ့မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီကားက 18+ ဟာသတွေနဲ့ လူပျိုစစ်စစ်လေးတွေအလွဲလွဲအချော်ချော်ဖြစ်ရတာကို ပိုးဆိုးပတ်စက်ရယ်ရတဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်. ပထမဆုံးကားဖြစ်တဲ့အတွက်အခြားကားတွေထက် ပိုကောင်းသလိုလဲခံစားရပါတယ်. ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းအနေနဲ့ကတော့ လူပျိုဘ၀ကိုကျွတ်ချင်နေတဲ့ ဘော်ဒါတွေကျောင်းကပွဲညမှာ ကျွတ်ဖို့ကြိုးစားရင်း အောင်မြင်မူ့ရပါ့မလားဆိုတာကို ဟာသတွေအနေနဲ့ကော 18+ အနေနဲ့ကောကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
IMDB: 7.0/10 384000 votes